खेलकुद – Enepali Samchar
पहिलो हाफमा नेपालविरुद्ध इराकको अग्रता
May 29, 2021 adminLeaveaComment on पहिलो हाफमा नेपालविरुद्ध इराकको अग्रता
e nepalisamchaar काठमाडौं l /बसरास्थित अल्फायहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफमा नेपाल ४–२ गोलको अग्रता बनाएको छ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अहिले मैत्रीपूर्ण खेलमा इराकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । बसरास्थित अल्फायहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफमा नेपाल ४–२ गोलको अग्रता बनाएको छ ।enepalisamchaar काठमाडौं l /बसरास्थित अल्फायहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा जारी […]
२० वर्षपछि इराक र नेपाल आज भिड्दै : नेपाली टिमलाई जितका लागि शुभकामना दिनुहोस् !
May 29, 2021 adminLeaveaComment on २० वर्षपछि इराक र नेपाल आज भिड्दै : नेपाली टिमलाई जितका लागि शुभकामना दिनुहोस् !
e nepalisamchaar // काठमाडौं l नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलअन्तर्गत इराकको राष्ट्रिय टोलीको प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यो खेल इराकको घरेलु मैदान अल्फायहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति ठीक १०ः१५ बजेबाट सुरु हुनेछ । नेपाली टोली गत बुधबार नै सो खेलका लागि इराक पुगेको थियो । नेपाली टोलीमा कूल २३ जना खेलाडी समेटिएका […]
यी खेलाडी भन्छन् – रोनाल्डो हरेक पल गोलकालागि जिउँछन्
May 10, 2021 adminLeaveaComment on यी खेलाडी भन्छन् – रोनाल्डो हरेक पल गोलकालागि जिउँछन्
E nepaalisamchaar// एजेन्सी – एसी मिलानका डिफेन्डर साइमन कजायरले क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल गर्न ज्यान दिने खेलाडी रहेको बताएका छन्। युभेन्टस र एसी मिलान बीच प्रतिष्पर्धा हुनु अगाडी एक मिडियासँग कुराकानी गर्दे साइमनले रोनाल्डो गोल गर्न सकेको सबै गर्ने खेलाडी रहेको बताएका हुन्। युभेन्टससँग भिड्नु अगाडी कजायरले रोनाल्डोको खुलेरै प्रशंसा गरे। रोनाल्डो गएको वर्षहरुमा धेरै परिवर्तन […]
घरेलु मैदानमै हार्यो युभेन्टस, च्याम्पियन्स लिग नै चिप्लिने अवस्थामा !
May 10, 2021 adminLeaveaComment on घरेलु मैदानमै हार्यो युभेन्टस, च्याम्पियन्स लिग नै चिप्लिने अवस्थामा !
e nepaalischaar// एजेन्सी – इटालियन सिरी ए अन्तर्गत आइतबार युभेन्टसले घरेलु मैदानमा एसी मिलानविरुद्ध लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । च्याम्पियन्स लिग स्थानका लागि निकै महत्त्व बोकेको खेलमा मिलान ३-० ले विजयी भयो । यस हारसँगै युभेन्टस अंक तालिकाको पाँचौ स्थानमा पुगेको छ भने मिलान तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । मिलान र दोस्रो स्थानमा रहेको एटलान्टासँग […]
विवादास्पद पेनाल्टी पछी : पहिलोपटक रेफ्रीसँग यसरी रिसाए जिदान
May 10, 2021 adminLeaveaComment on विवादास्पद पेनाल्टी पछी : पहिलोपटक रेफ्रीसँग यसरी रिसाए जिदान
E nepaalisamchaar// काठमाडौ । रियल मड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले सेभिल्लासँगको खेलका क्रममा रेफ्रीसँग आफू धेरै रिसाएको बताएका छन् । विवादास्पद पेनाल्टीका कारण खेलमा अङ्क बाँड्नुपरेको बताउँदै जिदानले पहिलो पटक आफू रेफ्रीसँग धेरै रिसाएको उल्लेख गरेका हुन् । आइतबार राति स्पेनिस ला लिगामा साविक विजेता रियल सेभिल्लासँग बराबरीमा रोकिएको थियो । रियलको मैदानमा सेभिल्लाले घरेलु […]
सुआरेजलाई यस्तो विशेष सरप्राइज दिने बार्सिलोनाको तयारी !
May 9, 2021 adminLeaveaComment on सुआरेजलाई यस्तो विशेष सरप्राइज दिने बार्सिलोनाको तयारी !
e nepaalischaar// एजेन्सी – स्पेनिस ला लिगाको उपाधि होडमा रहेका क्याटलान क्लब बार्सिलोना र एट्लेटिको म्याड्रिड आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुकाको ८ बजे क्याम्प नोउमा हुनेछ। हालको अवस्थामा एट्लेटिकोले ७६ अंक सहित लालिगाको शिर्ष स्थानमा छ भने बार्सिलोना ७४ अंक सहित तेस्रो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको रियल म्याड्रिडसँग पनि ७४ अंक […]
कसले जित्ला प्रिमियर लिग गोल्डेन बुट ? यी ५ खेलाडी बीच हुँदैछ तीब्र प्रतिष्पर्धा !
May 9, 2021 adminLeaveaComment on कसले जित्ला प्रिमियर लिग गोल्डेन बुट ? यी ५ खेलाडी बीच हुँदैछ तीब्र प्रतिष्पर्धा !
e nepalischaar// एजेन्सी – इंगलिस प्रिमियर लिग सिजनको अन्त्यतिर छ। सन् २०२०-२१ सिजनका ४ राउन्डका खेलहरु मात्र बाँकी रहँदा म्यानचेस्टर सिटि च्याम्पियन बन्ने पक्का-पक्कि भइसकेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडले सिटिले भेट्टाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। प्रिमियर लिगको जारी सिजनमा शिर्ष चारमा अटाउन तिब्र प्रतिष्पर्धा छ। पहिलो र दोस्रो स्थानमा म्यानचेस्टरका दुई क्लब रहने पक्का […]
स्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरेर सफल भएपछि डाक्टरले यसो भनेका थिए, तर बाँचेनन् म्याराडोना
November 25, 2020 adminLeaveaComment on स्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरेर सफल भएपछि डाक्टरले यसो भनेका थिए, तर बाँचेनन् म्याराडोना
काठमाडौं – महान अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ । ६० वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। अर्जेन्टिनी संचारमाध्यमका अनुसार हृदयघातका कारण बुधबार उनको निधन भएको हो । दुई साताअघि मात्र अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्स नजिकको अस्पताल ला प्लाटामा मंगलबार म्यारोडोनाको मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । ६० वर्षीय म्याराडोनाको सिटी स्क्यानको नतिजापछि उनको […]
फुटबल लिजेन्ड म्याराडोनाको हृदयघातका कारण मृत्यु
November 25, 2020 adminLeaveaComment on फुटबल लिजेन्ड म्याराडोनाको हृदयघातका कारण मृत्यु
काठमाडौं । फुटबल लिजेन्ड डियगो म्याराडोनाको हृदयघातका कारण ६० वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ । बेलायती पत्रिका द सनले अर्जेन्टिनी समाचारपत्र क्लारिनलाई उदृत गर्दै अर्जेन्टिनी फुटबलर म्याराडोनाको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । उनको मष्तिष्कमा रक्तश्राव भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । तर, म्याराडोनाको परिवारबाट भने मृत्युको पुष्टि हुन बाँकी रहेको दी सनले […]
November 19, 2020 adminLeaveaComment on सन्दीपले होबर्ट हुरिकेन्सबाट बिग ब्यास लिग खेल्ने
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका ‘ग्लोबल आइकन’ सन्दीप लामिछानेले अष्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग (बीबीएल) टी ट्वान्टी क्रिकेट होबर्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने हुनुभएको छ । होबर्टले आज विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीपलाई अनुबन्धित गरेको उहाँका व्यवस्थापक रमन सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता रकम भने उसले खुलाएको छैन । सन्दीपले लगातार तेस्रो पटक बीबीएल खेल्न लाग्नुभएको हो । यसअघि सन्दीपले […]